Amai vaTom Cruise vakanyangarika nenzira isingazivikanwi!
Vatori venhau vema alarm. Amai veTown Cruiser, Tom Cruise, havana kuonekwa pachena mumwedzi mishanu yapfuura! Zvinokwanisika kuti yakabatwa nokuda kwekudzikinurwa kana kusvibiswa.
Radaronline inoshuma kuti Mary Lee South yakaguma kuonekwa musi waApril 5. Zuva iri raive rakasviba Easter brunch muLos Angeles, pakati peScientology.
Cherechedza kuti mumakore mashoma akapfuura, amai vaTom Cruise vakagara naye, kumba kwake muBeverly Hills. Zvisinei, munaNovember 2014, akatamira kune imwe imba muBelmont Village, Houston. Kusvika iye zvino, nzvimbo yacho inoramba iri chakavanzika.
Inonakidza sezvakaitika kare: Kushamwaridzana Katie Holmes ku Brooks Hama manheru
Mune kimono uye chikwata: Katie Holmes akapfuura zuva
Chechi yeScientology inoranga zvikuru vakaramba kutenda
Izvo zvakarongerwa kuti kubviswa kwemai vane makore 78 vakazvipira kuitira kuti vave nekukwanisa kuchinja nyeredzi "Mission Impossible." Zvingangodaro, kereke yeScientologists, iyo Tom yakashanyira kubva muna 1990, inobatanidzwa mukunyangarika kwayo. Maererano nemumwe mudiki aitaura nemunyori wenhau kubva kuTabloid Star, mukuru weboka iri munguva ichangobva kugutsikana naTam Cruise. Haatombobvumirwi kupedza nguva nemwanasikana wake Suri uye akazova mudzimai wake Katie Holmes.
Chikonzero chekutsamwiswa uku kwakajeka: Tom Cruise inonzi ndeyevanhu vanozivikanwa zvikuru vevhidhiyo avo vari chikamu cheScientology sect. Uye chokwadi chokuti haaisanganisi amai vake muScientology inonzi inonyadzisa zvikuru. Zvinopikisa kuti mutambi anoda kubuda mumapoka evateveri vaRon Hubbard. Zvimwe ichi ndicho chikonzero chekuparara kwamai vake?
Upenyu hwehupenyu hwemuimbi weMilen Farmer
Imwe nyanzvi yeHollywood yakakurumbira yakabvuma kuti inoda vakadzi!
Paris Jackson akasiya paIndaneti manzwiro emweya kuna baba vake panguva yekuzvarwa kwake
Olivia Palermo netsika yake yemugwagwa 2016
Megan Fox ari kutarisira mwana
Zvakasimbiswa zvakasununguka: Rachel Weiss naDaniel Craig vari kugadzirira zvakare kuva vabereki
Mudzimai we "VaBean Bean" akakurudzira kudare rechinangwa chekugadzirisa kurambana
Nyeredzi "50 shades of gray" muNigones dzakachengetwa chishamiso chete
Megan Markle aiva nemhete neyekutanga kwaHanry Harry
Jay Zee neBeyonce vanoparidzira paIndaneti zvinyorwa zvemashure mavhiki maviri mushure mekunge vopindi vati vopandukira
Jesse James akanyunyuta nezvehupenyu hwakaoma uye akakumbira ruregerero kuna Sandra Bullock
Shamwari dzomunyori Lisa Minelli anonetseka nezvehutano hwake
Tom Cruise naKatrina Holmes
Zvinyorwa zvevisa kuPoland
E. zviratidzo zvecholi
Cage shiri dzinobata maoko
Zvishongedze nemirasi yemirasi
Mazuva ano mapurisa emadziro muimba yekugara
Chikoro chipi chakabatanidzwa kumba?
Muchato nezera rakasiyana
Inoshamisa kushanduka kweNetherlands munguva yekutumbuka kwemamiriyoni 7 tulips!
Nzira yekushandisa aerogril?
Mutori wenhau Christine Kreuk uye Allison Mack vakapomerwa mhosva yekutengesa varanda zvepabonde
Columns yakaitwa yepurasitiki inoputika
Zvakanaka sei kugovana nemurume?
Jikoni kubva ku chipboard
Akasiyiwa pfuma yekugara park Nara Dreamland
Bentley Elizabeth II anogona kutengwa nemunhu